Anarako : RAVAHINIARISOA
Fanampiny : Esther
Teraka tamin'ny : 11 Jolay 1940 tao Ankadivato Antananarivo
Ray niteraka : Randrianakoto (maty)
Reny niteraka : Ratoandromanana (maty)
Kara-panondro : 101 252 010 110 nomena tao TANA IV tamin'ny 1 Jona 1964 - Duplicata 9 Jolay 2003 à Manjakandriana. Série n° 523 425
Permis de conduire : 20204T tamin'ny 24 Febroary 1966
Nommée PCLS (Président du Comité Local de la Sécurité) dans le Fokotany Ankorona suivant la décision n° 65/FIV/MJK Elec du 17 mars 1992 par Jacques RAKOTOZAFY
Ordre de Mérite de Madagascar arrêté 6033/9F PRM/GCH du 4 juillet 1997
Chevalier de l'Ordre National décret 2001/726 du 13 juillet 2001 - JORM (Journal Officiel de la République de Madagascar) p.2422 du 2 octobre 2001
Caisse d'Epargne Tanà 358734
Carte de Pension : OA 43976 du 1 octobre 2002 - 218 Paierie Générale Antananarivo
11 Jolay 1940 tokony ho tamin'ny 8 ora alina no nahatongavako tety an-tany. Alakamisy io andro io. Sendra niakatra tao Antananarivo indrindra Itompokolahy Dokotera Ramangalahy hitondra ny fatin'Itompokovavy Raharifera vadiny mba haterina any Ankorona. Couvre-feu tamin'izay, tsy nisy nahazo nivoaka ka dia dokotera no nampiteraka. Ny zoma marainan'io dia lasa nidina taty Ankorona daholo ny rehetra ka i Dadatoa Rafilipo irery no nijanona niandry an'i Mama. Tao Ankadivato no toerana nahaterahako.
Rehefa lehibebe aho, ny kilalao nataonay tamin'izany dia mitaingina masinina goavy, joueur, baolina, sabaka, tamaboho, voanatsindrana atao olona. Faly ery aho tamin'izany. Ankadivato moa no toerana nahalatsahan'ny tavoniko eny ka na dia manonofy aza aho ankehitriny dia mbola ao ihany no hitrangan'izany. Efitra 2 ambany rihana ary ny fahatelo dia lakozia, eo akaikin'io lakozia io dia misy lalantsara izay misy ny tohatra miakatra any ambony. 20 mianadahy izahay no iray kibo iray tampo. 7 mianadahy sisa izahay amin'izao fotoana anoratako an'ity izao : 2 lahy ary 5 vavy.
Tao amin'ny sekoly FFMA Gilpin Ampandrana izahay vehivavy no nianatra ary ny lehilahy kosa dia tao amin'ny Ecole Officielle Faravohitra, niala tao dia nifindra tao amin'ny Sekoly Misiona Ambohijatovo Avaratra.
Mantsaka rano no raharaha fanaonay isaky ny avy mianatra hariva, lavitra ihany ny paompy eo amin'ny sampanana Bel-Air. Rehefa asabotsy izahay dia eo an-tokontany no manasa lamba, henjana ny fitaoman-drano amin'izany ka matetika dia entina eny Ankadindratombo Mandroseza ny lamba ho sasana, dia imtondra sakafo any. Ny harivan'ny asabotsy indray dia mandeha mianatra Sekoly Asabotsy ao amin'ny Fiangonana Batista Biblika Ankadivato.
Tsaroako rehefa maditra izahay (miady, mifanjana amin'ny raharaha) dia ny tsindaoro sy ny fehikibo no famaizana anay.
Rehefa vakansy indray izahay dia entin'ireo ray aman-dreninay any Toamasina na Ambatosoratra na Antsirabe Mpiasan'ny Gare tao Soarano moa ny dadanay ka izay no ahazoany mitondra anay mandeha masinina tamin'izany.
Fa indray andri tena tsaroako dia ny nandehananay tany Ambatosoratra. Vao tamin'iray ora alina dia efa nifoha nahandro vary sy laoka, efa nividy saosisy betsaka i Mama tamin'izay fa tsy toa, hono, ny midina eny amin'ny hotely fa dia tao anaty masinina ihany no nihinana.
Faly ery mivikiviky mandeha an-tongotra vao maraina eny na dia mavesatra aza ny entana. Tonga teo amin'ny gara dia milahatra eo amin'ny "quai" aloha ary ny dadanay manomboka ny "billet" vao miditra ao anaty masinina. Iadiana mafy ery ny famonjena ny akaiky varavarankely.
Indray andro dia nandeha nitaingina lakana tao amin'ny farihin'Alaotra izahay. Lakana 2 : ka ny iray feno ankizy kely, ny iray kosa izahay 3 dahy : i Gaby no nitondra ary izaho sy i No. Tsy hay ny nipetraka tao amin'ilay lakana ka nihilana izany ary dia nivadika ny lakana nitondra anay. Niakatra haingana tao amin'ilay lakana feno ankizy. Avotra soa aman-tsara ihany, namonjy ny morona dia lasa nody haingana hisolo akanjo, i Nenitoa Ranja no nahita anay dia nitomany natahotra fa io rano io, hono, dia maka olona isan-taona. I Papa sy Mama kosa dia revo tamin'ny fanorona ka tsy nahita anay. Soa ihany aloha é ! fa saika hody ny ampitson'io ihany raha hitany, anefa ny vakansy mbola mafana. Ny alin'iny narary i No fa voky rano dia mody nolazainay hoe : asa angamba voky tapioca izy. Sitrana ihany avy eo dia nitohy ny vakansy.
Tao am-pianarana indray dia tsy mba havanana loatra aho ka nahatsiaro sahirana tamin'ilay fanontaniana napetrak'i Ramose Andriantomposon hoe : Hanao inona ianao rehefa lehibe ? Ataovy ao anaty taratasy ny anaranao, ny ray aman-dreny..., ny adiresy mazava ary tandremo sao mandainga. Nieritreritra ela teo aho vao tapakevitra hilaza, afaka 2 andro koa moa vao naverina. Ny tena tiako : Mpampianatra. Sanganehana aho ary menatra satria sao hataon'ny mpampianatra na ny mpianatra hoe : Hanao mpampianatra hono. Isaky ny hariva dia angoniko ny ankizy ao an-tanànanay dia asaiko mipetraka eo amin'ny tohatra dia ampianariko. Mody kapohina kapoka dia hoe makarivotra na mirava.
I mamanay koa moa tamin'izany tsy salama ary hoy dadanay hoe : Andao i Esther hajanona amin'ny fianarany hanampy anao fa sao maninomaninona eo ianao ka hijaly izahay. Tsy nety anefa i Mama ka hoy izy hoe : Raha mbola mazoto izy hianatra dia aoka hianatra ihany. Ela aho vao afaka CEPE dia hoy ny eritreritro hoe raha vao afaka CEPE aho dia hiala amin'izay hitady asa. Efa saiky kivy tsy hianatra intsony aho. Kanjo raha tsy nanala fanadinana ambonimbony kokoa aho, Attestation izany, dia tsy afaka ny CEPE. Teo indray dia nanao hoe raha vao afaka Attestaion aho dia hampianatra amin'izay. Ka hay tsy mbola izany ihany no sitrapon'Andriamanitra ny amiko satria efa nanala BEPC indray aho vao afaka Attestation, dia toy izany hatrany ny fiainako. Dia nanao Bac indray vao afaka BEPC. Ary efa nampianatra aho vao nanala CAE.
Tao anelanelan'izany nampiditra demande hiasa amin'ny Administration aho satria reraka nitady tsy nahita asa tamin'ny fampianarana. Na dia izany aza tsy nandrian'ny saiko izany, dia namotoka taty Ankorona aho fa tsy hanao fanadinana. Kanjo nalain'Ingahy Mond alina taty aho. Dia nanao fanadinana ihany. Tsy afaka e !
Rehefa niverina avy tany amin'ny fanaovany miaramila Ingahy Mond dia nampitady vady. Izaho sy Ratompokovavy Tine moe no nanoro hoe : Ao amin'ny sekolinay (Madecasse io) mba misy Sécretaire mba malemy fanahy. Dia hoy i Vololona hoe : Raha tanteraka soa aman-tsara ny fanambadianay sy Ingahy Mond dia homeko izay tian'i Esther i Esther. Mbola tsy nisy izany hatramin'izao na dia efa nampahatsiahivin'i Papa taminy aza ny teniny.
Taorian'ny nahafatesan'Ingahy Mond dia niteny tamiko i Papa hoe : Tsy sahy niteny taminao aho ry Esther raha tsy izao efa maty izao i Raymond fa hoy izy tamiko hoe : Maditra i Esther ka alefako any amin'ny faritra tena lavitra indrindra tamin'ny nataony an'i Vololona. Andriamanitra anefa mahay ny zavatra rehetra anaka ka tsy namaly azy aho tamin'izany.
Teo amin'ny fahafatesan'Ingahy Mond dia niseho ny disadisam-piainana. Nataony izay higadrako mandra-pahafatiko anefa tsy izany no lalan'Andriamanitra, fa lalana nahazoako nijoro vavolombelona ny fitiavan'Andriamanitra izany. Maty teny amin'ny hopitaly Mahitsy Ingahy Mond dia nentina tao Ampandrana tranon'i David ny razana. Noraofin'i Vololona avokoa ireo famangiana (vola) sy ny zavatra rehetra (café-siramamy-labozia) naterin'olona hiandrasana faty, tezitra kosa izahay satria mba nisy ihany ireo dépense lany tamin'izany fiandrasam-paty izany (vary-siramamy-charbon-café-jiro,...). Raha vao nandevina izy ka tonga saika haka ny entany dia nobahanako ny varavarana, tsy navelako nivoaka. Nampian'i Tantely zanany moa izy tamin'izany. Rehefa avy nifandona teo izahay dia namonjy ny Girard moa izy haka Certificat Médical fa misy dokotera havany, hono, ao. Nahazo C.M. izy. Izaho koa moa nentin-dRaberin'i Dany tany amin'ny dokoteran'ny Gare naka C.M. dia nametraka ny fitarainako niaraka tamin'ila C.M. tao amin'ny Police Besarety. Tsy namelàn'i Louise zandriko izaho sy David raha tsy nifona tany amin'i Vololona. Tsy nanaiky ny fifonanay anefa izy.
Herinandro alohan'ny 26 Jona 1987 indrindra no tonga ny fiantsoan'ny Police ho eny amin'ny Brigade Criminelle Anosy. Natao ny fitsaràna, tsy vita ary teny am-ponja no natory, hoy ilay ramatoa izay notsaraina niaraka taminay hoe : Mbola ho avy ny "tour"-ndry madama fa mahereza â. Maraina dia nankany amin'ny Tribunal Anosy ary dia afaka soa aman-tsara. Menatra i Vololona fa tsy nahavoa ny tetik'olombelona. Afaka niara-nanao fety sambatra tamin'ny fianakaviana ihany aho.
Maro ny lalana efa nodiaviko teo amin'ny fampianarana : Nanao mpisolo toerana (suppléante) teto Antananarivo aho aloha vao tapa-kevitra handeha ho any amin'ny Faritany mba hidirana mpiasam-Panjakana raikitra. Analalava no toerana nanendrena ahy voalohany. Izaho sy i No no niara-nandeha tany. Sambany vao mba mitaingina aéroplane moa dia nozaraina bonbons, tsy sahy naka afa-tsy iray avy sao lafo be ny bonbon eny amin'ny aéroplane. hay ka zaraina fotsiny mba hanalana ilay feo migoroana ao anaty sofina avy amin'ilay aéroplane.
Nahafinaritra ahy ny fiainana tany, ny fandraisana anay, ny namana, ny mpiara-monina. Tao amin'ny Tale Bernardin de Sienne izahay no nivantana ary ny zanany vavy no niara-nampianatra tamiko tamin'izany (Mme Luce).
Ny trano fitsarana no manelanelana ny tranon-tsekoly sy ny ranomasina. Ny fiangonana indray dia tany Ampasika lavitry ny trano onenanay. Isan'ny mpitarika tanora tao aho ary ny Juge Rasoanaivo no mpampianatra hira.
Nanampy anay tokoa i Juge tamin'ilay olon-dratsy mandona alina tao aminay. Izy mihitsy no mi-ronde miaraka amin'ny alikany sy ny jeep.
Teny amin'ny raharaha mpisolo toerana no nifankahitanay sy i PIERRE Martial dadan'i Pierre. Tezitra mafy tamiko i David anadahiko sy i Louise rahavaviko tamin'izay fa hoy i Berthine rahavavin'Itompokovavy Jeannette hoe : I Esther anie ka miaraka amin'i Pierre Martial ary mamo an-tatatra foana e ! Namely ahy mafy tokoa i David nahare izany ary ny fitantaran'i Louise koa moa dia tena tsy tantiko mihitsy. Na dia tao aza anefa izany rehetra izany dia tsy nahafoy ahy i P.M. fa noho ny feon'ny fieritreretako hoe : tsy sitrak'Andriamanitra ny vady tsy misoratra dia nampandeferiko ny fitiavako ary nipetraka taty Ankorona tsy niaraka tamin'i P.M. intsony aho.
Tonga nampianatra teto Ankorona aho ny volana Desambra 1988. Lany ho P.C.L.S. (Présidente Comité Local de Sécurité) sady Directrice'ny EPP rahateo teto koa moa dia niseho indray ny sotasotam-piainana : Voalaza fa nangalatra hazo niaraka tamin'Itompokolahy Joujou aho dia nalefa teny amin'ny Brigade Fiadanana 3 andro ary nentina teny amin'ny Tribunal Anosy.
Andriamanitra anefa tsy mahafoy ny zanany fa mitsinjo mandrakariva ary dia nanampy tamin'ny fampidirana rano kosa indray teo amin'ny tanàna Ankorona. Maro ny sakana nolalovana tamin'izany anefa dia vita soa aman-tsara ihany izany ka niara-nisotro ny rano (FIKRIFAMA) ny vahoakan'Ankorona tamin'ny zoma 2 Febroary 1992.
Napetraka hisotro ronono aho rehefa feno 60 taona (Jolay 2000) ary lasa Présidente'ny Zokiolona Tsaramiafara indray, 29 izahay no isan'ny mpikambana tamin'izay.
IRETO NO SEKOLY NIANARAKO :
- Sekoly FFMA Gilpin Ampandrana
Tale : M. Andrianaly Ratavao, M. Andriantomposon
Mpampianatra : Rtoa Razaimalalatiana, Rtoa Rasoanandrasana Julia, Rtoa Delphine, Rtoa Justine, Rtoa Raobivelo, Mme Henriette, Mme Edith, Mme Estelle, Mme Charlotte, M. Rakotondrainibe, M. Rajoelison Georges, M. Rakotondrasoava Georges. M. Philibert
- Sekoly Rasalama
Tale : Andriamanjato Richard
Mpampianatra : M. Harris, M. Gaston, M. Thomas, M. Robin, Mademoiselle Merline
- Sekoly Madecasse Andravoahangy
Tale : Ravalison
Mpampianatra : Edmond Ravalison, Gaston Ravalison, Rakotoson Daniel
IRETO NO SEKOLY NAMPIANARAKO :
- EPP Fiadanana Soamanjaka (Fenoarivo)
- EPP Ambohimanarina (Ara)
- EPP Ambohimanga (Rova) Ambohidrazana
- EPP Faravohitra (Tale Vazaha)
- EPP Alasora (Tale Andriamanantena)
- EPP Analalava (Tale Bernardin de Sienne, 1ère Inspection: M. Hoareau Paul)
- EPP Andranofasika
- EPP Andriamena (Tale Rabarison Alfred)
- EPP Maevatanàna
- EPP Ambodin'Isotry (Tale Ramaroson)
- EPP Ankadivato (Tale Mme Ratsimbazafy)
- EPP Ankorona (sady Tale)
Ireo sombin'asa fampianarana teo anivon'ny fianakaviako no mba tiako hampahatsiahivina eto. Sanatria tsy fireharehana na filana dera no anoratako izany eto fa mba ho lesona miampita ho an'ny taranaka mifandimby sady ho fanatanterahana ny tenin'ireo ray aman-dreny (RANDRIANAKOTO sy RATOANDROMANANA) hoe :
- ianareo mifankatia
- ianareo mifampitantana
- ianareo mifanohana eo amin'ny fiainana no reharehanay
- Ramanantenasoa Noëline (Analalava)
- Rafarasoa Sahondra (Ambohimanga-Rova)
- Rasendrasoa Voahirana (Faravohitra, Maevatanàna Benoît Bevava)
- Rahelivelo Romain (Ambohimanga-Rova)
- Rahajason Fanomezantsoa (cours CEPE)
- Randrianatoandro Stefanasy (cours CEPE)
- Randrianakoto Johary (cours CEPE)
- Ravahiniarison Pierre Martial (Ambodin'Isotry)
- Randrianatoandro Elitiana (Ankorona)
- Ramiaramisaina Toky (Ankorona)
- Ramiaramisaina Mbola (Ankorona)
- Ramiaramisaina Minosoa (Ankorona)
- Ravelonaina Noelisoa (Ambodin'Isotry)
- Razafiarimanana Gilbertine (Ambodin'Isotry)
- Randriamanantsoa Mahefarivelo (Ankadivato)
- Rafalimanana Hajason Ruffin (Ankorona)
- Randrianarson Tahiana (Ankorona)
- Randrianarson Tiavina (Ankorona)
- Randrianarson Tanjona (Ankorona)
Ho anao izay mamaky ity tantaram-piainako ity dia ireto misy teny fampaherezana atolotro ho anao :
1) Indray andro raha nalahelo ny zafikeliko izay tsy niara-nipetraka tamiko intsony aho dia lasa nanezaka nanao raharaha be (fanadiovana tanàna), tena reraka tokoa aho tamin'izany satria hoy ny eritreritro hoe : Rehefa tena vizaka aho dia matory. Kanjo inona no niseho ? Vao mainka nivadibadika tsy nahita tory. Nitodika ny saiko ka nifona tamin'Andriamanitra aho nahatsiaro ny teniny hoe : Ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany (Isa.45:11). Tsapako fa nitady hisalovana ny asan'Andriamanitra aho.
2) Vao haingana tamin'ny alarobia 2 Aprily 2008 dia nisy havandra be toy ny totohondry namely ny varinay izay mbola teny an-tanimbary. Potika ny vary. Narary ny aiko nahita izany. Kanjo nahazo hery aho namaky ny voa nafafy ny 3 Aprily 2008 manao hoe : Ampy ho anao ny fahasoavako (II Kor.12:9).
3) Farany hamaranako izany dia aza misaraka amin'Andriamanitra fa hoy Izy hoe : Antsoy aho dia hovaliako ianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao (Jer.33:3). Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angataho izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany (Jao.15:7).
Esther RAVAHINIARISOA (Nitendry: ny mpanatontosa)